LAYAAB: Sir Alex Ferguson Oo Dib U Xusuustay Waqtigii Uu Arkay Xidig Kooxdiisa Ka Tirsanaa Oo Madaxa Xabad Looga Hayo. - GOOL24.NET
LAYAAB: Sir Alex Ferguson Oo Dib U Xusuustay Waqtigii Uu Arkay Xidig Kooxdiisa Ka Tirsanaa Oo Madaxa Xabad Looga Hayo.
Halyaygii hore ee Manchester United ee Sir Alex Ferguson ayay waxyaabo badani ku soo mareen waqtigii dheeraa ee uu manchester United joogay wuxuuna dib u suxuustay dhacdo layaableh oo ku soo martay xarunta tababarka kooxdiisii hore ee Man United.
Sir Alex Ferguson ayaa Manchester United ku soo qaatay muddo 26 sanadood ah wuxuuna kula soo guulaystay 38 koob oo ay 13 ka mid ahi ahaayeen koobka Premier League isaga oo shaqada tababaranimo ka fadhiistay sanadkii 2013 kii waxaana sidoo akle ka mid ahaa shan koob oo FA Cup ah iyo laba koob oo Champions League ah.
Sir Alex Ferguson ayaa ciyaartoy aad u badan oo nooc kasta leh kula soo shaqeeyay Manchester United laakiin waxaa jirtay hal arin oo aanu waligii ilaawi doonin isla markaana uu ka sheekeeyay taas oo ah maalintii uu arkay ciyaartoy kooxdiisa ka tirsanaa oo madaxa qori ama xabad looga qabtay.
Sir Alex ayaa ciyaartoyda kooxdiisii Man United waxa uu u qaaday SAS Training Center halkaas oo ay tababar ku qaadanayeen wuxuuna Sir Alex yidhi: “Iyagu way jeclaysteen. Waxay noo qaadeen qolka dadka la soo afduubay, waxayna soo qaadeen afar ciyaartoy iyaga oo madaxa miisaska u saaray”.
Sir Alex oo ka sheekaynaya wixii intaas kadib dhacay ayaa yidhi: “Dhamaanba si deg deg ah bambo ayaa u qaraxday wax walba waxa uu noqday mugdi. Daqiiqado gudahood waxaa baxday bang, bang, bang, bang waxaana soo laabtay laydkii ama korantadii”.
Sir Alex oo xusuusta maalinta sheekadeeda sii wata iyo qaabkii uu u arkay Pual Ince oo madaxa qori looga hayo ayaa yidhi: “Waxaa halkaas taagnaa afar askari isla markaana mid ka mid ahi waxa uu madaxa qori ama xabad ugaga hayay Pual Ince. Isagu wuu qayliyay, ugu dhawaan wuu dhintay, xaqiiqdii cajiib ayay ahayd”.
Paul Ince ayaa Man United ku soo qaatay lix sanadood kadib markii uu hal milyan oo gini ugu soo biiray wuxuuna kooxda u saftay in ka badan 200 kulan isaga oo soo dhaliyay 25 gool.
Markii hore heshiiskii uu Pual Ince ugu biirayay Man United ayaa fashilmay kadib markii uu tijaabada caafimaadka ku dhacay laakiin September 14, 1989 ayuu ugu danbayn ku soo biiray Man United.
Laakiin Ferguson ayaa marlae Pual Ince ka iibiyay Inter Milan isaga oo kaga iibiyay 7.5 milyan gini kadib markii uu xidhiidhkoodu aad u xumaaday ee ay si xun iskugu dhaceen.